प्रधानमन्त्री ओलीका ५ दुःख
विमल नेपाल काठमाडौं, ३० वैशाख
‘बौद्धिक सूचीमा दर्ज हुन सरकारको विरोध गर्नैपर्छ’ भन्ने मान्यताबाट प्रेरित ठूलो समूह छ । उनीहरु आफूलाई ‘आलोचनात्मक चेत’को ठेकेदार ठान्छन् । विकल्पविहीन विरोध नगर्नेलाई उनीहरु ‘सत्ताभक्त’को आरोप लगाउँछन् ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘आरति’ नगर्नेलाई समृद्धिविरोधी देख्ने ‘ओलीभक्त अरिङ्गाल’ गिरोह झन् खतरनाक छ । उनीहरुलाई प्रश्न मनै पर्दैन । ‘भक्तिगाना’मा मस्त तिनीहरु आसेपासेबाहेकलाई ‘राक्षस’ देख्छन् ।
अहिले मूलतः यी दुई ‘अतिवाला’बीच द्वन्द्व छ । नागरिक अन्योलमा छन् । विरोध गर्नेले विरोध मात्रै गर्छ । समर्थन गर्ने समर्थन मात्रै ! कि दानवै बनाएका छन् कि देउतै । समालोचना गर्ने र गुणदोषका आधारमा विश्लेषण गर्ने समूह कम छ ।
‘जीवनको उत्तरार्ध’मा प्रधानमन्त्रीलाई पनि ‘देश र जनताका लागि गलत नै गरौं’ भन्ने नहोला । कतैबाट परिचालित विचार वा व्यवस्था लाद्नैपर्ने बाध्यताबाट ओली मुक्त नहुन पनि सक्छन् । तर, अहिले चलेको ‘विरोधी हावा’ले प्रधानमन्त्रीको ‘अतिआत्मविश्वासी’ इच्छा पनि खिइँदै जान थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली जति जब्बर देखिन्छन्, उनीभित्र उत्तिकै दुःख पनि होलान् । नियतै खराब नभए पनि गलत शैली र आसेपासे समूहको निहित स्वार्थले उनी नराम्ररी गाँजिएका छन् । हिजो राष्ट्रियताको नारा भजाएर शक्तिमा पुगेपछि रट्न थालेको समृद्धिको नारा पनि पट्यारलाग्दो हुन थालेको छ । यसबीच प्रधानमन्त्रीका खास पाँच दुःखबारे चर्चा गरौं ।
दुःख १ः रोगी शरीर र शैली
दुबै मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको पनि १० वर्ष भयो । सान छ, सम्पत्ति छ । तर, सन्तान छैनन् । व्यक्तिगत जीवनमा प्रधानमन्त्री ओलीका दुःखमध्येको एक हो यो ।
राजनीतिक आन्दोलनकै क्रममा वर्षौं ‘जेल जीवन’ बिताएका ओली अहिले सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका छन् । पार्टीभित्र पनि प्रायः प्रतिपक्षी बनेका उनी अहिले सत्तापक्ष भएका छन् । राजनीतिक उपलब्धिका हिसाबले ओलीको उत्तरार्ध जीवन फलिफाप नै छ ।
संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि देशमा नाकाबन्दी भएको विषय परिस्थितिबीच प्रधानमन्त्री भएर भजाएको राष्ट्रियताको नारा खुब बिक्यो । त्यसकै जगमा दुई तिहाइ बहुमतसहितको ‘शक्तिशाली सरकार’को नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर, उनी भने आफैं झनपछि झन् कमजोर भइरहेका छन् ।
‘आफूबाहेक अरुले बुझ्दैनन्’ भन्ने लघु सोचबाट ग्रस्त प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यो समय चुनौतीसँगै अमर हुने अवसर पनि हो । तर, विरोध सुन्नै नसक्ने र विरोधीलाई ‘ओठे जवाफ’ फर्काउने शैलीका कारण उनको पाइन खस्कँदो छ ।
दुःख २ः निरीह मन्त्री, शक्तिशाली आसेपासे
‘शक्तिशाली प्रधानमन्त्री’का मन्त्रीहरु निरीह छन् । मन्त्रीलाई आफ्नो सहयोगीभन्दा ‘कामदार’ सोच्ने प्रवृत्तिले समस्या भएको छ । शक्ति केन्द्रीकृतको लोभका कारण विलापको स्थितिमा पुगेका छन्, ओली ।
उनलाई मन्त्रीले भनेको भन्दा ‘आपेपासे चम्चे’हरुले लगाएको कुरामा विश्वास लाग्छ । जनप्रतिनिधिलाई शक्तिशाली बनाउन डराएर केही सीमित झुन्डलाई वरिपरि राख्छन् । जसले उनको भक्तिगान गाउँछ, त्यो नै उत्कृष्ट ठान्छन् ।
मन्त्री वा मन्त्रालयका सचिवका लागि समेत प्रधानमन्त्री भेट्ने कुरा ‘महाभारत छिचोल्न’भन्दा कठिन छ । तर, पार्टी सरकारमा भएको ‘मौकामा चौका हान्न’ पुगेका ‘भरौटे’को भरोसा नै प्रधानमन्त्रीका दुःखको कारणमध्येको एक बनेको छ ।
दुःख ३ः खतरनाक ‘कर्मचारी सत्ता’
राजनीतिक व्यवस्था र व्यवस्थाअन्तर्गत बनेको सरकारभन्दा कर्मचारीको सत्ता भयानक र शक्तिशाली छ । प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा गर्छन् । कर्मचारी त्यसको प्रवर्धन गर्छन् । घुसबिना नागरिकको कुनै काम हुँदैन । ‘सिन्को सार्न’ पनि कमिसन खोज्छन् ।
स्वतः स्थायी हुने प्रावधानका कारण कर्मचारी स्थायी सरकारजस्तो भएको छ । मन्त्रीलाई शाखा अधिकृतले घुमाइदिन्छन् । कर्मचारीले मिलाइदिएको भागबन्डा देखेपछि मन्त्री र सांसदको ‘तेस्रो नेत्र’ बल्छ ।
चुनावमा गरेको खर्च उठाउनैपर्ने बाध्यता जेलिरहेका मन्त्री, सांसदको ‘द्रव्यमोह’लाई कर्मचारीले राम्ररी बुझेका छन् । पार्टीपिच्छेका कर्मचारी छन् । जो आफू दलनिकट नेतालाई जसरी पनि खुसी पार्छन् । एक हिसाबले ‘सरकारलाई सफल बनाउने कि असफल ?’ भन्ने हात कर्मचारीकै हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वमाथि कर्मचारी नै हाबी छन् ।
कर्मचारीको कार्यशैली सुधार्न नीतिगत प्रयास भए पनि व्यवहार झुर छ । सरकारी तलब खाएर एनजीओको गुलामी गरिरहेका कर्मचारीका कारण प्रधानन्त्रीको दुःख बढेको छ ।
दुःख ४ः गुटको ‘ह्याङ ओभर’
विगतका एक नम्बरको गुटियार केपी शर्मा ओलीमा अहिले पनि ‘ह्याङ ओभर’ बाँकी नै छ । पार्टी र सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा पनि गुटलाई मात्रै विश्वास गर्ने प्रवृत्तिका कारण ओलीले धेरै दुःख पाएका छन् ।
‘बालुवाटारका चम्चे’ मात्रै होइनन्, मन्त्रालयैपिच्छेका ‘चम्चा’को आवाज ठूलो छ । त्यहीँ आवाजलाई सुमधुर संगीत ठानेर प्रधानमन्त्री मन्त्रमुग्ध छन् । त्यस्तै, कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति होस् या राज्यस्रोत दोहन गरेर कार्यकर्ता पोस्ने मामला ! विगतमा आफूलाई आरति गरेकाबाहेक ओलीलाई कोही मन पर्दैन ।
पार्टीभित्रैका फरक समूहका नेता कार्यकर्तालाई ‘भित्तामा पुर्याउन पाए’ आफू सफल भएको ठान्छन्, ओली । पार्टीभित्रको जिम्मेवारी बाँडफाँट होस् या सामान्य समान्य भागबन्डा ! उनी गुटभन्दा माथि उठ्न सकेका छन् । जसकारण, उनको दुःख बढेको छ । आलोचना बढेको छ ।
दुःख ५ः जानकारी ज्यादा, ज्ञान कम
यस्तो लाग्छ, ओलीलाई थाहा नभएको केही छैन । सबै शास्त्र बुझेका छन् । मौका पाए उनी चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन फिङलाई समृद्धिको पाठ सिकाउँछन् । मोदीलाई साम्रदायिक राष्ट्रियता पढाउँछन् ।
जानकारीलाई नै ज्ञान भन्ने हो भने ओली निकै ज्ञानी छन् । तर, आफूमा भएको सूचना या जानकारीलाई विचारको तहमा पुर्याउने मामलामा उनी सधैं चुक्छन् । कहिलेकाहीँ भाषण गर्दा विचारको हवला दिए पनि उनी वैचारिक बहससँग रमाउँदैनन् ।
उनी ‘ड्याङ्ग भनेर छ्याङ्ग बुझाउन खोज्ने’ मामलामा माहिर छन् । तर, विचारलाई स्थापित गर्ने मामलामा उनी कमजोरसिद्ध छन् । विचारलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने वाकपटुता भए पनि बाैद्धिक समूहको चित्त बुझाउन सक्ने आँट नहुनु ओलीको खास दुःख हो ।
आलोचनाबाट आत्तिने स्वभावका उनीलाई ‘समृद्धिको सुगा रटान’ पनि घाँडो भएको छ । मुलुकमा समाजवादको बहस भइरहेका बेला भौतिक संरचनाको विकासलाई समृद्धि ठान्ने प्रधानमन्त्रीलाई ‘डोजर आतंकको आलोचना’ फिटिक्कै मन पर्दैन । ‘समृद्धि भनेको खुसी हो’ भन्ने नबुझेका होइनन् । तर, तत्काल भ्रममा पारेर भए पनि काम देखाउनैपर्ने हुटहुटीबाट उनी ग्रस्त छन् ।
संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत बनेको सरकारबाट समाजवादको ‘मुर्ख आस’ नगर्दा कम निराश भइन्छ । सरकार त व्यवस्थाको एउटा अंग मात्रै हो । त्यसैले हाम्रो कमजोरी पहिल्याउन जरुरी छ ।
‘सबैले साइकल चढ्ने भएपछि मात्रै गाडी किन्नुपर्छ’ भन्ने ‘कोरा समाजवादी’ चिन्तन पनि समायानुकूल छैन । ‘जेब्राक्रसबाट मात्रै सडक पार गर्नुपर्छ’ भन्दा सरकार तानाशाही देख्ने क्रान्तिकरी नजर पनि खराब छ ।
पुँजीवादको विकासबिना एकैचोटि समाजवाद ल्याउने महत्त्वाकांक्षा पनि घातक हुन सक्छ । दलाल पुँजीवादले समाजवादको बाटो बनाउने आस गर्नु पनि मुर्खता नै हो । यसर्थ, भएका उपलब्धि संस्थागत गर्दै थप उपलब्धिका लागि संघर्ष जरुरी छ ।
भलै, यो सिद्दान्तलाई पुँजीवादी पक्षको आरोप नै किन नलागोस् । र, दुःखी प्रधानमन्त्रीबाट सुख र खुसीको आस गर्नुभन्दा व्यवस्था परिवर्तनका लागि प्रारम्भिक पहल चाल्नेतिर सोचौं ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख ३०, २०७६, २१:०९:००